काठमाडौं– शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्वामित्वमा ३९ वटा चारपांग्रे सवारी छन् । त्यसमध्ये ६ वटा गाडी मन्त्रालय (शहरी विकास मन्त्रालय)को प्रयोजनमा रहेको देखिन्छ । एक-एक गाडी गृह मन्त्रालय, प्रदेश ५ र प्रदेश २ मा पठाइएको छ ।
२०७४ असार असार २५ गतेको मितिमा ९६ लाख ९० हजारमा खरिद गरिएको गाडी मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले चढ्छन् । उनका लागि यो जगेडा गाडी हो ।
विभागबाटै हस्तान्तरण भएको बा१झ ९४४९ नम्बरको गाडी पनि सचिव सिंहले नै चढ्दै आएका छन् । यद्यपि विभागबाट उपलब्ध गराइएको विवरणमा यो गाडी उल्लेख छैन ।
उक्त गाडी प्रोजेक्टबाट प्राप्त भएको र प्रोजेक्ट सकिएपछि सचिव सिंहले प्रयोग गर्दै आएको विभागका प्रवक्ता पदमकुमार मैनालीले बताए ।
मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले चढ्ने बा२झ ३८४२ नम्बरको गाडी पनि विभागबाटै प्राप्त भएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ, तर विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उक्त गाडी पनि उल्लेख छैन । सो गाडीको स्वामित्व नै हस्तान्तरण भइसकेकाले विभागको विवरणमा उल्लेख नरहेको प्रवक्ता मैनाली बताउँछन् ।
विभागले बा२झ ३६३८ र बा२झ ३०९२ नम्बरको गाडी पनि मन्त्रालयमा पठाएको छ । ती दुवै गाडी मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले प्रयोग गर्दै आएको छ ।
बा२झ ८२५ र बा२झ २९६४ नम्बरका गाडी मन्त्रालयका सह–सचिवहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
लोकान्तरमा समाचार प्रकाशित भएपछि एक गाडी फिर्ता !
शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण सहितको समाचार लोकान्तरमा प्रकाशित भएपछि एउटा गाडी भने विभागमा फिर्ता भएको देखिन्छ ।
हामीलाई मन्त्रालयले सूचना उपलब्ध गराउँदाको बखत मन्त्रीको निजी सचिवालयमा प्रयोग भइरहेको देखिएको बा२झ ९७० नम्बरको गाडी हाल विभागअन्तर्गतको डिजाइन तथा निर्माण शाखाले प्रयोग गरिरहेको विवरणमा उल्लेख छ । 'उक्त गाडी हालसालै फिर्ता भएर विभागमा आएको हो, डिजाइन तथा निर्माण शाखाले नै प्रयोग गरिरहेको छ,' प्रवक्ता मैनालीले भने ।
विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बा२झ३८४३, प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले बा२झ २९८४ र अर्का उपमहानिर्देशक द्वारिका श्रेष्ठले बा२झ २२६४ नम्बरको गाडी चढ्ने गरेका छन् ।
महानिर्देशक गेलालले चढ्ने गाडी आयोजनाबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । सो गाडी र उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले चढ्ने गाडीको मूल्य हामीलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छैन । प्रवक्ता समेत रहेका उपमहानिर्देशक मैनालीले चढ्ने गाडी भने ९६ लाख ९० हजारमा खरिद गरिएको हो ।
विभागको काम गाडी किनेर बाँड्ने हो ?
मन्त्रालयकै विभाग भएकाले मन्त्रालयमा विभागको गाडी प्रयोग हुने कुरा सामान्य रहेको प्रवक्ता मैनाली बताउँछन् । 'मन्त्रालय र विभाग एउटै हो,' प्रवक्ता मैनालीले भने- 'मन्त्रालयले गाडी किनर बस्दैन । विभाग योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले यसले खरिद गरेका गाडी मन्त्रालयले पनि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने हो ।'
गृहमन्त्रालय पठाइएको गाडीको सन्दर्भमा मैनालीले भने- 'गृहमन्त्रालयले मागेपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
अफिस आउन र फर्किन ६० लिटर इन्धन, काममा जाँदा अतिरिक्त !
विभागले चारपांग्रे सवारीको हकमा मासिक ६० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको जनाएको छ । साइट आयोजनाका लागि आवश्यकता अनुसार थप इन्धन प्रदान गरिने विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
उक्त ६० लिटर इन्धन कार्यालय आउन र घर फर्किनका लागि मात्र भएको प्रवक्ता मैनालीले बताए । 'त्यो ६० लिटर इन्धन कार्यालय आउन र घर फर्किनका लागि हो,' मैनालीले भने- 'आयोजनाको काममा बाहिर जाँदा खल्तीबाट पैसा निकालेर इन्धन हाल्ने कुरा त हुँदैन । किलोमिटर अनुसार अतिरिक्त इन्धन विभागले उपलब्ध गराउँछ ।'
चार गाडी लिलाम गर्नुपर्ने !
विभागले ४ वटा गाडी लिलाम गर्नुपर्ने अवस्तामा रहेको जनाएको छ ।
हेर्नुहोस्, विभागमा रहेका चारपांग्रे सवारीको विवरण :
६६ वटा दुईपांग्रे, मासिक १० लिटर इन्धन
विभागको स्वामित्वमा ६६ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन छन् । तिनका प्रयोगकर्ताले मासिक १० लिटर इन्धन विभागबाट पाउने गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् शृंखलाका १६ भाग :
भाग- १६ : ‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !